#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUHLAZIYWA KWEMPAHLA YOKUGQIBELA NOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA
YIZISE! INFANTINO IYAFUNA UMTSHUMISI OYODWA…
I-BANANA RIPHABLIKI: I-SWISS URHWAPHILIZO OLULELELA EMVA KWEZOMTHETHO
WWC2023 BONISA UKUBONISA OBENZA AMANDLA PHAKATHI KWE-INFANTINO…
UMZANTSI WASEMZANTSI AFRIKA UYAQHUTYELWA NAMOYA WOKUGQIBELA
NGOKUPHELELEYO: INFANTINO TELEPHONES TRUMP YONCEDO KWAKHE…
ISIPROFETO SEBILILI: INFANTINO YAYINGENAYO INJONGO YOKUSULA KWABO…
Agasti 25, 2020
UNYULO LWECAF 2021: ISANGQA OKANYE INGQINA LOKUNGCWABA…
EMILIO GARCIA SILVERO: DIBANA NENDODA EMISELWE KU…
IXESHA LIQALILE UKUQALA UKUCINGA NGE…
UEFA KUNYE NOKUQINISEKISA BAKHUTSHANE UMBUTHO WABO OMTSHA…
INKCAZELO ENTSHA ye-AHMAD neFIFA YENKOLO ye-Afriya
IFIFA ITHUMELA IMIGAQO EBUDALA BOBUNGOZI KWI-CAF &…
Matshi 19, 2020
I-CAF IPHELELE NGOKUPHELELEYO KUNYE NOFOUZI LEKJAA KA-MOROCCO…
UKUFIKA EKUFIKA: Funda indlela iMeko kaMusa yokuLungela ngayo…
I-UEFA KUNYE "AMAZWE AMANCINCI" IPARADOX EFIFA
Agasti 9, 2019
IBANANA REPUBLIC: ISWITZERLAND IBONISA IHLABATHI UKUBA KUTHENI IYUROPHU…
UTSHINTSHO LWE-INFANTINO NGOKU UBUNGQINA KWITRINIDAD & TOBAGO…
Matshi 28, 2020
NGOKUPHELELEYO: IINKCUKACHA ZOKUTHENGWA KWEZITHUTHI NGE…
Mamela kuMazwi ka-Amr Fahmy wokuGqibela njengoko…
I-FIFA iyaqhubeka nokonakalisa intshabalalo nomonakalo ...
NGUBANI OYA KUVOTA IVOTI YOKUQINISEKILELA I-INFANTINO KWI-SEPTEMBA 18 YELIFA LEMFAZELWEYO?
ISIPROFETO SEBILITY: I-INFANTINO yayingenasizathu SOKUGCINWA EMVA KOKUZONWABISA
YIZISE! I-INFANTINO DARES INQUNUNU YENKULUMKO EGQIBILEYO YOKUGQIBELA APHA kuye
IMITHETHO YOKUGQIBELA IYA KUDLULA IBALULEKILEYO KWI-FIFA UKUBA I-INFANTINO IQHELE UKUQHUTYELA
UNYULO LWE-CAF ngo-2021: ISIQINISEKISO SEBHODI okanye UBUNGQINA BUKUKHUSELEKILEYO
BANANA REPRIKI: IISEKHODI ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA EZOBUCHWEPHESHE
I-EMILIO GARCIA SILVERO: Dibana NOMNTU WAYEZA UKUZE AZE ATHUNYELWE IINQUNUNU KUMNQOPHISI WESITHILI SE-STEFAN KELLER
IBANANA REPRIKI: I-SWITZERLAND IQHUTYELA UKUTHENGA I-ROTTEN REPTEN REPUTEN YOKUGQIBELA
IXESHA LIFikile LOKUQALA UKUJONGA NGEHLABATHI NGAPHANDLE kweFIFA
I-UEFA kunye neCONMEBOL ZIYATHETHA UNXIBELELWANO NGEXESHA LOKUQHAQHA ISPIN
Ikhaya	Amazwana	#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUHLAZIYWA KWEMPAHLA YOKUGQIBELA NOKUFUNDA NGOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA
#BlackLivesMatter: INDLELA YOKUHLAZIYWA KWEMPAHLA YOKUGQIBELA NOKUFUNDA NGOKUGQIBELA NGOKUGQIBELA
ibhalwe ngu admin Juni 7, 2020
Eli nqaku liyafumaneka kwezi lwimi zilandelayo:
Uqhanqalazo #blacklivesmatter e-US kule veki iphelileyo lusinika imvelaphi esisiseko ukuze siqhubeke 3rd ukufakelwa kwecandelo lethu lengxelo enesihloko esithi "Imiceli mngeni yoLawulo kwi-SAFA" eyabhalwa liGosa eliyiNtloko leBhola eKhatywayo yeBhola eKhatywayo yaseMzantsi Afrika, uDennis Mumble.
I-FIFA, umbutho ogama linguSG Mme. UFatma Samoura ulahle iqela labasebenzi abachasene nobandlululo nangocalucalulo, kule veki ucacisile isikhundla sakhe kwimikhankaso yokulwa ucalucalulo eqhutywa kwilizwe jikelele ziiklabhu zeFIFA kunye nabadlali exhasa uGeorge Floyd.
I-FIFA ibisoloko ibamba ukuba imiqondiso yezopolitiko kunye neeproteni ekunikezelweni ngomdlalo ngokusemthethweni bekungavumelekanga, kodwa kubonakala ngathi kwenza okungafaniyo kweli tyala, isithi "iyakuxhasa naliphi na iphulo eliya kuyeka ubuhlanga" ngaphambi kokuba yongeze ukuba "iFIFA iyabuqonda ubunzulu Imvakalelo kunye neenkxalabo ezivezwe ngabaninzi bebhola ngokujonga imeko ebuhlungu yeFloyd kesi…
USamoura, ngexesha lokukhupha umsebenzi ochasene nocalucalulo kwiminyaka emi-3 eyadlulayo, wayekrokrela ukuba umsebenzi wawo wenziwe kwaye ubuhlanga bungapheli, kwaye uMhlaba ungcono.
Cinga ngephulo leendaba zosasazo kule veki iphelileyo, i-FIFA izama ukuzimanyanisa nengqondo yehlabathi, ethe yabona zonke iinkokheli eziPhezulu zeHlabathi zinobunzima kwicala lokulwa ucalucalulo kunye nezigidi zibonisa ezitalatweni nangona kuqhubeka ubhubhane.
Abadlali abahlukeneyo kumanyano noGeorge Floyd obuleweyo.
Ngaba iFIFA kaGianni Infantino yeFIFA iya kuhlala ibanjwa kwicala elingalunganga kwimbali?
Kodwa ucalucalulo kwilizwekazi laseAfrika lusizi kakhulu kunokuba umntu unokucinga.
Ukubiza uMongameli we-SAFA uDanny Jordaan ongumlinganiswa oyintlekele kuya kuba yinto engezantsi.
Umzekelo, nge-Agasti ka-2017 wafumana umphathi wakhe, u-Dennis Mumble, wamxelela ukuba amabini amaSekela-Mongameli we-SAFA uLucas Nhlapo kunye no-Elvis Shishana baye bakhalaza kuye besithi i-SAFA inengxaki yokucinga ukusukela oko kwaba bantu babini bahlala beqaqanjiswa kwimithombo yeendaba. Udliwanondlebe lusandula ukuba lolohlanga oluxubeneyo.
Aba bantu babini bomdyarho oxutyushwayo yayingu (Danny Jordaan) kunye ne-CEO yakhe u-Dennis Mumble.
Ngokucacileyo uJordaan wayefuna uMumble anciphise ukubonakala kwakhe kwimithombo yeendaba ngesizathu sokuba i-VP izakuqhubeka nokukhalaza, ibango lokuba bobabini iVP bayala ngokungakhathali ukuba bayenza, xa bejongana.
Ngoobani aba bantu babini banegunya kwiSAFA, oosasazo banokufumana ulwazi olubaluleke kakhulu kulobuchwephesha nangolunye ulwazi, ukuba ayingeyiyo i-CEO kunye noMongameli?
Kodwa kule meko, uMongameli ubonakala efuna ukushenxisa i-CEO kwimbonakalo eza ngokuzenzekelayo nesikhundla sakhe, oko kuthetha ukuba uMongameli uthathe yonke indima yokusasazwa kolwazi e-SAFA, nkqu nolwazi lobuchwephesha olungeyonto yakhe.
UMumble akazange amenywe kwinkomfa yabezindaba okanye isishicileli esenziwe nguMongameli- kwanaxa imiba uJordaan axoxa ngayo namajelo eendaba ebandakanya uxanduva lwe-CEO.
UMumble waphinda wabizwa nguJordaan's PA ukuba ahlangane naye e-Fun Valley apho akhubeka khona kwinkomfa yemithombo yeendaba, ukubonelela ngesishwankathelo sempumelelo yoMbutho kunyaka wekhalenda ka-2017.
UJordaan wenza intetho eyenzakalisayo, elungiselelwe liCandelo lezoNxibelelwano, elicacisa uninzi lwemicimbi yezolawulo. UMumble wayengazange abonwe, okanye waxelelwa ngale nkomfa yabezindaba, wathi ke xa athe wacelwa ukuba ajoyine uJordaan kwitafile ephezulu, wehla njengomgaqo.
Endaweni yoko, uJordaan wabiza uNksz Nomsa Mahlangu, owayeselilungu le-NEC kunye nomkomishinara we-CAF, ukuzalisa isitulo esingenanto esasikufuphi namanye amalungu eBhunga awayekho, kwisimemo sakhe.
Esi sigqibo sasiphindwe kabini, eyokuqala ukuba isebenzise uNksz. Mahlangu njengepropathi, kuba bobabini bengamabhinqa kwaye BAMBALWA, uyakuthathwa ngokuba uyintsalela ye-SAFA efunekayo ngokobuni nangobuhlanga, ngaphandle kokuba yena usongelo lwezopolitiko kuJordaan onolusu oluthambileyo.
Isizathu sesibini, esichazwe nguJordaan iya kuba kukuzama esidlangalaleni ukuthotywa kunye nokuthoba uMumble emehlweni amalungu e-NEC kunye namajelo eendaba, ngokumfaka kwakhe njengoko esenza intetho yakhe engathi ngumntwana kumajelo eendaba.
Ukuxelelwa ebusweni bakho ukuba awukwazi ukwenza uxanduva lwakho ngokwesiseko sombala wolusu lwakho yinto engakhathali kakhulu nengafanelekanga ukuyithetha kumntu ohlanga oluxubeneyo kwiLizwe leMvula ngokusekwe kwimbali yayo ebuhlungu, uthathele ingqalelo U-Mumble uneziqinisekiso ezichasene nocalucalulo ezazikhokelela ekuthinjweni iminyaka eli-18.
UNomsa Mahlangu: Usebenze njengesiphakamiso nguMongameli weSAFA uJordaan.
Ngaba uDanny Jordaan wayenoloyiko lokuba kanye leempawu kunye nendlela emenze wakhanga kakhulu kwizitulo zebhola ekhatywayo kwilizwe ngaphezulu kweminyaka engama-25 ziyafana ngokucacileyo nezo zifunyenwe eMumble (kubandakanywa nokuba ngumdyarho oxubeneyo) kwaye lonto yenze uMumble Ngaba kukho isoyikiso kwisikhundla sakhe?
Kwale nguJordaan, owayesebenza njenge-CEO yeSAFA kunye ne-SA 2010 e-LOC, wabhala ngemfihlo incwadi eya kwi-FIFA SG uJerome Valcke nge-10 kaDisemba.th Ngo-2007, ndamgunyazisa ukuba enze intlawulo kwangaphambili yokuhlawula amalungu eKomiti Elawulayo yeFIFA kwinkxaso-mali ebilindelwe ngexesha leNdebe yeHlabathi yeFIFA ka-2010.
Ngelixa uMongameli weSAFA uGqirha Molefi Oliphant wayezobhala incwadi egunyazisiweyo ye-LOC kwiinyanga ezimbalwa kamva, wafika nje wafunda ngencwadi yeJordaan kwiminyaka emva koko, evela kwiFIFAgate kwaye wothuka ngakumbi kukuphinda kukaJordaan xa wayefunda. I-FIFA SG Valcke eyayinayo, ngencwadi yegama likaJordaan, yayisele ihlawule ngaphezulu kweedola ezi-3 zeedola kwizinyobo esenzelwe imali ezizigidi ezili-10.
Kuba wayenobunkunkqele ekujongeleni phantsi uMongameli wakhe we-SAFA ngelixa esebenza njenge-CEO, uJordaan uhlala ecaranoia ukuba abanye baya kumjongela phantsi.
Kodwa akuphelelanga apho ubuhlanga bakhe buphela khona, u-Jordaan usebenzisa umbala wesikhumba zombini njengesihlangu kunye ne-Assegai (umkhonto wokuphosa owenziwe waziwa nguKumkani wamaZulu uShaka).
Ngamaxesha athile ngasekupheleni kuka-2008, uDanny Jordaan (njenge-CEO yeSAFA kunye ne-SA 2010 LOC) waqala imizamo yakhe "yokucoca" i-SAFA ukuqinisekisa ukuba "iNdebe yeHlabathi yeBhayiya isetyenziselwa ukuphucula ibhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika."
Amawakawaka amalungu e-SAFA awuthathe lo myalezo ngokunzulu kwaye ajoyina inzame. Bakholelwa ngenene ukuba ubunkokeli obutsha buza kuzisa amanqanaba aphezulu ophuhliso, ubuchule behlabathi kunye nobunkokeli obuthobekileyo kwikhowudi yezemidlalo kwelizwe.
Umgaqo osisiseko owamkelwa bubunkokeli obutsha yayikukuba iingeniso zeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ye-2010 akufunekanga zisetyenziselwe ukunceda abantu njengoko inkonzo yebhola ibisoloko ngokuzithandela. Wonke umntu wabonakala ekholelwa kule mfundo.
I-SAFA yayisendleleni yokushiya inkolo yobuntu eyadlala ibhola yoMzantsi Afrika kwiminyaka engama-80 nama-90s, ngothotho lweeprojekthi zedemokhrasi, ezinje, ngokuzibandakanya ngakumbi naMalungu eSAFA, eyakha inkqubo-sikhokelo yolawulo eyomeleleyo kunye nokuhambelana nemithetho yeSAFA ezo zeMigaqo yeFIFA.
Ubukho bezemali buyeyona ndawo iphambili kolu ncedo lutsha, kwaye i-EY yonyulwa ngo-2012, ngokwesicelo sikaGqr Jordaan, enye inotshi yongezwa kulawulo olululo lwe-totem pole.
Nangona kunjalo, xa uJordaan ethathe isikhundla njengoMongameli weSAFA ukusukela ngo-2013, ulawulo olululo kunye nokusebenza ngokukuko kwaqala ukwenziwa ngendlela engagungqiyo ngemithetho nemithetho yeSAFA ukuze kugcinwe ithuba phezu kwabachasi.
Ukuzigcina sele kungoyena ndoqo wobunkokeli kwi-SAFA-kugcinwa ngenkqubo “yobunkokheli enezibonelelo” ngendlela yezabelo zamazwe aphesheya ezinenzuzo kunye nokufunyanwa kwezithuthi kumalungu eBhunga.
Iklasi ye-Mercedes Benz C: I-SAFA amalungu e-NEC abolekwe kwimali-mboleko.
Kulindelwe unyulo lowama-2013, uJordaan wayeqinisekile ngeBhodi encinci ye-FIFA yeNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo ye-FIFA kunye ne-SAFA NEC (ikakhulu abantu abafanayo kumacala omabini) ukuba mabazithenge izithuthi zeC-Class Mercedes Benz yamalungu eNEC akhethekileyo (abo ebengakhange asebenze kwiBhodi yeHlabathi yeBhola eKhatywayo yeFIFA ka-2010) ngentsalela ye-R2010 yezigidi kwi-LOC's USD160m budget.
Amalungu acelwa ukuba abuyisele “imali-mboleko” yezi moto zeMercedes Benz kwi-honorali yakhe yonyaka ngelixa zikwi-SAFA NEC, kwaye zibuyise nayiphi na imali eseleyo kwimali ukuba ayengakhethwanga kwi-NEC ngo-2013.
Emva kokuba iqela lokuqala labaxhamli bezithuthi lingazange lonyulwa kwakhona njengendoda, uJordaan waqinisekisa i-NEC ukuba yongeze imali-mboleko kumalungu asanda kunyulwa e-NEC, kunye namanye amalungu ashiyekileyo kwiqela lokuqala, ukuba athenge izithuthi zeC-Class Mercedes Benz nabo. Iimeko ziya kufana nakwiqela lokuqala.
Ngokufanelekileyo wacela amalungu eNEC asandula ukunyulwa ukuba azivumele ukuba anikwe iimali mboleko zezithuthi zeC-Class Mercedes Benz… ngubani na oya kuthi?
Eso ntshukumo sibangele isithuba sezikhundla kwi-NEC kanye njengoko kusenzeka kubuninzi bemibutho yeBhola ekhatywayo yaseAfrika. UJordaan waqiqa ngelithi ukuthuthwa ngokunesidima yenye yezithintelo kuphuhliso lwebhola kwilizwe liphela kwaye imimandla kunye naMalungu e-NEC kufuneka banikwe izithuthi ezifanelekileyo ukuze bancedise kwiinzame zabo zophuhliso.
Kulapha ke apho kubonakala khona ubuhlanga obufihlakele kancinci, u-Jordaan akazange acele i-NEC ukuba ivume imali-mboleko enokuthi amalungu ayo akwazi ukufikelela kuyo ukuziphuhlisa, umzekelo, ukuthenga indlu njengaye nawuphi na umntu onengqondo, endaweni yoko wafumana imali-mboleko Yotyando ”…
Ukuba uJordaan wayengu Mongameli womanyano lwase Mzantsi Afrika weRugby, ngewayeyicelile na le njongo, yokuchitha imali?
Icacisa inkolelo emhlophe yokuphambukela kwinkawu yokuba ibambisa into ethile ecwebezelayo kwindawo emxinwa enendawo encinci, xa inkawu ingena kwaye ibambe into ekhanyayo ngenqindi, ayinakho ukuyikhupha kuba inqindi libanzi kakhulu ukuvulwa okuncinanana, nobunjani bayo, ayiyi kuvumela into ebengezelayo, ikhokelele ekubanjweni kwayo.
Njani ukurhawula inkawu!
Kumzekeliso ongasentla, uJordaan ngumzingeli omhlophe, amalungu akhe e-NEC yeenkawu ngelixa iimoto zeC-Class Mercedes Benz zizinto ezikhanyayo kwigubu (i-SAFA).
Ukuba wenze uphononongo lobume bezithuthi zeMercedes Benz kunye namalungu angaphambili e-NEC, amathuba okuba iipesenti ezingama-90 azisebenzi kwaye ngenxa yoko iyancipha kwaye ayisebenzi.
Ucango lweminyaka emine olujikelezayo kwiSAFA NEC kwaye ezi poster zaphuma nohambo oluncinci lwangaphandle kunye nembolekoMercedes Benz!
Nangona kunjalo i-SAFA ibisokola ukuqokelela imilinganiselo esezantsi kubangama-5 amalungu e-NEC asusela kwi-2009 ukuya kowama-2013, ngaphandle kweenzame ezininzi zokuqokelela imali nezoyikiso zokuthatha amanyathelo asemthethweni.
Ngapha koko, uJordaan ungenelele ngasese kwiimeko ezininzi ukumisa inyathelo ngakuye ngelixa ehlawula inkonzo yomlomo kwiintlanganiso zeBhunga, esithi i-SAFA iqokelele imali eseleyo ngayo nayiphi na indlela enokubakho.
Kulindelwe unyulo luka-snap lowu-2018 (belithetha ukubamba abaphikisi ukuba bangahambi) kunye nokuzenzekela okuvela kumalungu e-NEC kwangaphambi kuka-2013 kunye ne-NEC yangoku, uJordaan ulindele omnye bunzimaUkuphuma kwamalungu e-NEC, kwaye kuye kwafuneka agcine imali-mboleko entsha kwisithuba semali mboleko yemoto.
Ucele ke uSihlalo weKomiti yezeMali (Mnu. Mokoena), ukuba athethathethane nabathengisi bezithuthi abathengise ngemali ethengwayo, nangona kunjalo akekho umntu ozokuchukumisa i-SAFA ngesibonda esiziinyawo ezilishumi ngenxa yomonakalo odalwe kukutyhileka kuka-2015. I-FIFA $ 10M yokunyotywa, izityholo zokudlwengula ngokuchasene noJordaan ngulowo wayesakuba lilungu le-ANC elalichongwe nguJennifer Ferguson
Okubi nangakumbi, ngeli xesha iimali zeSAFA bezikhe zanyathelwa kwaye umbutho wawusokola ukugcina iintlawulo zababolekisi, kwaye akukho namnye kwinkampani yezithuthi oya kuthi abonelele i-SAFA ngaphandle kokuba kusekho imali kuphela.
Ngayiphi na imeko ngexesha uJordaan kunye noMumble bathatha isikhundla e-SAFA njengoMongameli kunye ne-CEO ngokulandelelana ngo-2013, umbutho wawusele ukho kwi-R30M intsilelo yokuphuma kwemali eyayiqokelelene iminyaka eliqela ngenxa yenxalenye yeembono ezibandakanyekileyo ezinje nge-hare ukuthenga amalungu e-NEC izithuthi zeMercedes Benz.
Ngaphandle kwe-CEO evuma isicwangciso seminyaka emi-3 esiguqulwe yikomiti yezeMali ukususa le ntsilelo, uJordaan uza kunyanzela i-SAFA ukuba ingenise inkcitho engafunekiyo ngokungafunwayo.
Umzekelo, kwi-2014 ukuya kowama-2015 FY, Umqeqeshi oyiNtloko weQela leSizwe eliDala leSizwe-u-Efrayim Mashaba- wanyanzelisa ukusebenzisa inqwelomoya enqwenelekayo kwiqela lonke, esophula iindleko zokuhamba zeqela. Xa uMumble walayo ukwenza le ndleko, uJordaan, wangenelela kwaye wanyanzela i-SAFA charter ukubaleka ngenqwelomoya ngokwesicelo soMqeqeshi.
Owayesakuba ngumqeqeshi woMzantsi Afrika uEfrayim Mashaba: Izicelo ezihlanyayo.
Kwakuloo nyaka, kwintloko efanayo yomqeqeshi wayefuna ukunyuswa komvuzo wakhe awurhoxileyo uMumble, kodwa uJordaan wanyanzelisa ukuba aqwalasele ngokutsha ngenxa yeendleko zomqeqeshi xa esiya esidlangalaleni.
Yongeza koku, iindleko ezingafakwanga i-R396,000 yezibonelelo zemihla ngemihla kwiiNtloko zokuThunyelwa, phantse i-R3 yezigidi yeQela leSizwe eliPhezulu labaseTyhini kwiNdebe yeCyprus engafunekiyo, imfuno yoMqeqeshi oyiNtloko weQela leSizwe labaDala ukuzisa uMncedisi welinye ilizwe. Umqeqeshi ngexabiso le-R1.4 yezigidi…
Ezi ndleko zingasetyenziswanga ziphantse zayitshabalalisa intsalela esempilweni eyayicwangcisiwe yokunciphisa intsilelo yokuqokelelwa kwemali.
UJordaan udibana nomntu ongabinayo ntetho yokuhlala kunye neqela lakhe ebacacisela ubunyani bemali kubo, kwaye abaxelele ukuba umbutho ukwindlela eyahlukileyo.
Ke umntu unokulindeleka njani ukuba akhokele lo mbutho untsokothileyo?
UJordaan akakwazi ukwahlula nendima yakhe eyahlukileyo yezobupolitika kunye ne-Ofisi ye-SAFA, sesinye sezizathu zokuba amazwe amaninzi akhuphe umthetho wokuba nabani na obambe i-Ofisi kaMongameli weBhola ekhatywayo akanakho isikhundla kwezopolitiko.
Xa uJordaan wonyulwa yi-ANC ukuba abe nguSodolophu oLawulayo waseNelson Mandela Bay ngo-2015, wayesabugcinile ubuMongameli beSAFA.
INelson Mandela Bay ikwatyhola nje iSAFA malunga noku. I-R2.8 yezigidi ngegalelo labo ekusingatheni i-AFCON ka-2013, kwaye wathi xa esiba nguSodolophu, uJordaan wanyanzelisa ukuba iSAFA iqokelele ityala, ade acele iNtloko yezoKhuseleko ye-SAFA, iProtocol kunye nokuVunywa, bathunyelwe kuye njenge-Chief of Staff .
Yayiyile ndoda inikwe umsebenzi wokuthetha-thethana nomphathi wedolophu ngetyala, eyabulela nje. U-Mumble uye ku-Jordaan ukuze enze le ntlawulo kodwa wothuka xa u-Mongameli we-SAFA u-cum uSodolophu wehlisela kuye ngenzondelelo, emxelela ukuba akukho ntlawulo iya kwenziwa kuba sele evume uhlahlo-lwabiwo mali, kwaye into ye-SAFA ayikho. .
UJordaan njengoSodolophu waseNelson Mandela Bay: Imbambano yomdla.
Kuyabonakala ukuba u-Jordaan uyaluqonda uhlahlo-lwabiwo mali kwindima yakhe yezopolitiko kodwa abe ezityeshela ezo zeSAFA, injani nale ndoda? Isifo sengqondo esixhalabisayo?
Emva kokubamba iNdebe yeHlabathi yeBhola eKhatywayo yeFIFA ngo-2010, uMzantsi Afrika ubambe i-AFCON 2013 ne-CHAN 2014, ungacinga ukuba lento yanele umbutho ophathwe yimali kodwa hayi, uJordaan ngokungathandabuzekiyo wazibophelela kwi-SAFA ukusindlekela ubuNtshatsheli be-Futsal base-Afrika ngo-Epreli 2016 ngesicelo I-CAF kuba i-CAF ayikwazanga kukhusela enye inginginya yolu khuphiswano.
Ngokungafaniyo nesakhiwo sokhuphiswano lweFIFA apho ibhunga lolawulo lwebhola ekhatywayo lifika nohlahlo-lwabiwo mali lwalo lonke ukhuphiswano, iindleko zokhuphiswano lweCAF zithwalwa ngokukodwa ngumbamkeli, kwaye xa kungekho nkxaso kaRhulumente, i-SAFA kuye kwafuneka ifumane imali yokuxhasa le bhili. .
Nangona kunjalo, uJordaan wayefuna ukukhuphisana nesihlalo seBhunga leFIFA kwingingqi yeAnglophone yase-Afrika kwaye umnqweno ongaboniyo wamnyanzela ukuba aphose umoya malunga nemali yeSAFA.
Engqondweni yakhe, ukusingathwa kwale tumente eMzantsi Afrika kuya kuhambelana nevoti yesihlalo seBhunga leFIFA, kwaye wabona ukuba ukubamba amandla kuya kuqhuba iivoti ngendlela yakhe.
Ngelishwa, ikomiti yokuziphatha ye-FIFA yenqabile ukucoca abaviwa abathathu kulonyulo, iChabur Goc (South Sudan), Kalusha Bwalya (Zambia) noDanny Jordaan (uMzantsi Afrika) ngenxa yophando oluqhubekayo.
Ngeli xesha, uJordaan wayephantsi kukrokrelo lokunyotywa apho wagunyazisa ukuhlawulwa kwezigidi ezilishumi zeedola kumalungu eFIFA Exco ngo-10.
Kodwa ke, eshiye i-R18 yezigidi zolu khuphiswano, eshiye inkcitho ibingabandakanywa kuhlahlo-lwabiwo mali luka-2015 ukuya ku-2016 olwaluphunyezwe ngoJuni ngo-2015 kwaye ekubeni i-arhente yezentengiso ye-CAF iLagardere Sports yayingenakufumana mxhasi-mali omnye. Ziinkampani ezili-100 zaseMzantsi Afrika ebezisondele kuzo.
Kumele kuqatshelwe ukuba ngaphandle kweenkampani ezingama-20 eziphambili zase-Afrika, ubuncinci sisiqingatha sivela eMzantsi Afrika, kwaye zona ziyala ukunxulumana ne-SAFA kunye nogqatso oluzayo, njengoko kuye kwenzeka, ngasemva kunobuqhophololo nezityholo zokudlwengula ngokuchasene UJordaan, uxelele kakhulu.
Unokuxoka kwaye azifihle iinyani ngokuxoka PR (njengokuzama ukurhola izityholo zokudlwengula uSihlalo wePSL uIrvin Khoza) kodwa ngokucacileyo, iinkampani ezinkulu bezingayithengi.
Kwaye babethetha ngemali yabo!
Siyakucaphukela ukuyivuma kodwa i-FIFA inyanzele into yokuba kunyulwe u-Walter Nyamilandu (endaweni kaDanny Jordaan) kwisihlalo seBhunga le-FIFA yeAnglophone Africa, kuba kungenzeka ukuba uJordaan wayebonakalise ubuhlanga nokungafundeki kwezemali kwiqela elilawulayo. Ukugxotha kwizenzo zokuphakama kwakhe kwe-SG Fatma Samoura kunye nomgaqo-nkqubo osemthethweni wenkohlakalo nguMongameli wawo uGianni Infantino.
Kwaye kulihlazo elingakanani kwabo bantu badibeneyo bohlanga lwaseMzantsi Afrika, njengoTrevor Noah odumileyo, ukuba u-Jordaan usavunyelwe ukuba kwinqanaba lebhola lase Mzantsi Afrika, emva kodlwengulo kunye nezityholo zokunyoba zazenziwe zathandana naye, ukanti usebenzisa ubuhlanga ukugcina ubambelelo. emandleni.
I-ARGENTINA: I-GIANNI INFANTINO THEATER YOLWAZI LOKUFUNDA NOKUGQIBELA KWIPOLITIKI
NGABE IXESHA LIYA KUFUMANA UMCULO KWI-FIFA?
ISIPROFETO SEBILITY: INFANTINO AKUKHO NANJONGO YOKUZIPHATHA…
UNYULO LWE-CAF ngo-2021: ISIQINISEKISO SEZAKHONO OKANYE UBUNGQINA…
I-EMILIO GARCIA SILVERO: DIBANA NENDAWO YOKUHLAZIYA ...
IXESHA LIFikile LOKUQALA UKUFUNA ...
I-UEFA kunye neCONMEBOL ZISENZELA IXABISO LABO ELITSHA ...
UNXIBELELWANO LWEENDAWO ZOKUHAMBELANA NONYAKA WESIQINISEKISO SEJANSI KUNYE NOKUXHASA KWAKHE ...
OH DANNY JORDAAN, KUFUNEKA UYA ...
UGIANNI INFANTINO UTSHINTSHO: IKENYA- "ABABUTHAKA & ...
UKUTHENGA KOKUGQIBELA KWI-GIANNI:
UKUQHUTYELWA KWE-GIANNI INFANTINO: I-KENYA-TRINIDAD KUNYE NETyala leTobb ...
Shiya Comment Rhoxisa Phendula
NGUBANI OYA KUVOTA IVOTI YOKUQINISEKISA UKU ...
ISIZO SEZOBUCHWEPHESHE KUYA KUDLULA NGOKUGQIBELA KWIFIFA ...
BANANA REPRIKI: I-SWITZERLAND IQHUTYELA UKUZE LUZE UQHUTYELWE I-ROTTEN ...
NGABE LIHLABATHI LONTO LIYAFUMANA UMCULO ...
I-ARGENTINA: I-GIANNI INFANTINO INGXELO YOMBONO WE-ABSURD & ...
#CAFPwCAuditReport: INDLELA YOKUBHALA ISANGQA KWI-AHMAD KWI-24 MILLION CAF CASH
UFOUZI LEKJAA UNGENZA UMNQOPHISO WESIFUNDO SE-CAF
Ityala lamaNqaku kunye neMigangatho emiBini yeFIFA: uKalusha Bwalya vs Michel Platini
U-Isha Johansen: I-FIFA ayiyi kuyivumela i-Ghost of Madman Foday Sankoh ukuba ihambe eSierra Leone
ISIQINISEKISO SE-AHMAD: UKUGCINWA KWEXESHA LALO MGANGATHO WOBUCHULE
UKUFAKWA KWENGCACISO YOKUTHENGA
Facebook Twitter Instagram Imeyli yocingo uShishino
Imibhobho yoMhleli (15)
Facebook Twitter Instagram Imeyli yocingo
@ 2019-Konke kulungile kuGciniwe.
Buyela ku Top
IKALUSHA ATTEMPTS 2ND BITE AT FAZ DESPITE ...
UGIANNI INFANTINO UTSHINTSHO: IKENYA - "ABABUTHAKA ...
I-AHMED YAHYA: YAYE YAYE WENZA ISENZO ...